Safal Khabar - रुपन्देहीको दक्षिण भेगमा आवतजावतमा रोक
मङ्गलबार, ३० बैशाख २०७७, २१ : ५३
काठमाडौँ । कोरोना सङक्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले हुलाकी मार्गको दक्षिण भेगको आवतजावतमा रोक लगाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थका अनुसार हुलाकी सडकको दक्षिण क्षेत्रमा बुधबारदेखि लागू हुने गरी आवतजावत गर्न नपाइने र कार्यालयबाट जारी भएको पास रद्द गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
#कोरोना भाइरस #रुपन्देही
१. रोनाल्डोले युभेन्टसलाई हारबाट जोगाए
३. ‘तान्दातान्दै श्रीमती र छोरीलाई पुर्यो’ : पहिरो पीडित
४. सलह पुनः नेपाल फर्किन सक्ने सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह
५. मेरो प्रेम सम्बन्धका बारे आएको टिकाटिप्पणी र समाचारमा कुनै सत्यता छैन : पूर्णिका शाह
६. एक स्वास्थ्यकर्मीले सारे १२ जनालाई कोरोना, तीन वटा वडा सिल
७. असारे विकासको नमुना : निर्माण सम्पन्न भएको १० दिनमै भत्कियो नाला
८. आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ? भारी वर्षाको सम्भावना
९. विदेशमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपालीहरु मध्ये ९२ प्रतिशत संक्रमणमुक्त